Abavelisi boomatshini bokufikelela - AbaThengisi boomatshini baseChina ababoneleli kunye neFektri
LQMG Series Plastic isityumzi
Zonke iibhokisi ze-rotor ezityumza i-LQMG zenzelwe ukuba zonyuse isivuno esityumkileyo sezinto ezingenanto, ezinje ngeebhotile zeplastiki kunye nezinye iimveliso zokumodareyitha, kunye nokuphucula ukusebenza.
Amanzi apholileyo ajijekayo
Isinxibelelanisi samawele esikrola esithunyelwe ngaphandle sikhethiwe. Xa kuthelekiswa nesiguquli sokuphindisela semveli, sinempawu zokusebenza okuphezulu, ukusebenza ngokuzolileyo, ukusebenza ngokulula kunye nobomi benkonzo ende.
Uhlobo lwebhokisi (imodyuli) yeyunithi ye-chiller yamanzi
Uqoqosho kwaye ngokuthe ngcembe: ifriji isiguquli samkela uphawu lwangaphandle oludumileyo oluvalwe ngokupheleleyo uhlobo lwe-compressor.it yengxolo encinci, ukusebenza kakuhle okukhulu, kwaye iqulethe ityhubhu yobhedu yokutshintshiselana ngobushushu, ukungenisa iinxalenye zevalvethi. Yenza i-chiller ukuba isetyenziswe ixesha elide kwaye iqhubeke ngokuzinzileyo.
Uhlobo lwebhokisi (imodyuli) yokupholisa umoya opholileyo
Uqoqosho kwaye ngokuthe ngcembe: ifriji isiguquli samkela uphawu lwangaphandle oludumileyo oluvalelwe ngaphakathi uhlobo lwe- compressor.it yengxolo encinci, ukusebenza kakuhle,
Ukusebenza okulula: ukusebenza kwemihla ngemihla kwe-chiller kugxile kwiphaneli yokulawula, kwaye kulula ukusebenza, ungasetha ngokungenisa i-SEIMENS PLC,
Amanqanaba apheleleyo okuguqula chiller
Amandla okonga umbane: isiguquli, ifeni, itekhnoloji yokuguqula isantya sempompo yamanzi zezona mveliso ziphambili.
Ubushushu obuphantsi (imodyuli) iyunithi ye chiller
Izixhobo ziyilelwe ngokukodwa inkqubo yokonga umbane, isebenzisa ubuchwephesha obuphambili, ukubonelela ngokushiya amanzi ngaphezulu kwe -20 ℃ kwaye inokulawula ngokuthe chu ubushushu bembumbulu ngezantsi -5 ℃.
LQQA Horizontal Umbala Umxhubi
Umgqomo wesinyithi esingenasici kunye neeparles zirusi simahla kwaye kulula ukuzicoca. I-Hopper inokuthambekela kangako kwiidigri ezili-100 ukothula izinto ezilula.
LQQB nkqo Umbala Umxhubi
Ukudibanisa ngokukhawuleza ngokulinganayo, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nemveliso ephezulu. Unyawo oluncinci kwaye luxhotyiswe ngee-castor zokuhambisa. Isinciphisi seplanethi-cycloid yomelele kwaye iphantsi ingxolo. Iswitshi yokhuseleko iqinisekisa ukuba umatshini usebenza kuphela xa isiciko sivaliwe.
LQQD Ukuqwayita umbala Umxhubi
Ubushushu kunye nokuseta ixesha kukwiyunithi enye yohlengahlengiso olulula. Izinto zixutywe kwigumbi elitywiniweyo; Umphanda yayiqulathe maleko ubushushu kabini ulondolozo. Umgqomo wenziwe ngentsimbi engenasici ukuze icocwe lula. Iialamu zokugcwala kwemoto.
Umxube weMbala ojikelezayo
Umgqomo wenziwe ngentsimbi engenazintambo engeniswe ngomhlaba ocoliweyo. Ukujikeleza kwe-360-degree ukuvumela nokuba kuxutywe kwaye kulungiselelwe ukutya. I-Fender ithintela abaqhubi ukuba bangene kuluhlu lomatshini ukuqinisekisa ukhuseleko
RM2401-2406 No. 511 Indlu yeTianmuxi Road. IShanghai 200070, PR China